Al-nuur Baran oo ku guulaystay tartankii ka socday Daljir, iyo xafladii gabagabada oo ka dhacday Boossaaso. – Radio Daljir
Agoosto 30, 2012 5:12 b 0
Boossaaso, Aug 19 – Munaasabad ballaaran oo lagu soo gabagabaynayay tartankii bishii Ramadaan ka socday idaacadda Daljir, ayna ku baratamayeen dugsiyada sare Puntland ayaa xalay lagu soo gabagabeeyay hotelka Jubba ee magaalada Boossaaso.
Xaflada gunnaanudka tartanka ayaa waxaa kasoo qayb-qaatay masuuliyiinta gobolka Bari, waxgarad, aqoonyahanno, iyo qaybaha bulshada ku dhaqan Boossaaso, waxaana madashaasi khudbado qiimo-badan ka jeediyay masuuliyiin kale duwan.
Tartankaan oo muddo bil ah ka socday idaacadda Daljir ayaa waxaa ku baratamayay illaa 24 ka mid ah dugsiyada sare ee gobollada Puntland, waxaana barnaamijkaan iska kaashaday shirkada Golis, dalada waxbarashada ahliga ah ee PEN, wasaaradda waxbarashada Puntland, iyo idaacadda Daljir.
Gaba-gabadii tartanka ayaa waxaa isku soo horay dugsi sare Al-nuur Baran, iyo Al-Najax Baran, waxaana koobkii ku guulaystay dugsi sare Al-Najax Baran.
Barnaamijka tartan iyo tacliin ayaa waxaa uu si toos ah u socdaa sanadkii 4-aad, iyadoo ay soo badanayaan dugsiyada ka qaybgalaya sanadkasta tartankaan, waana markii ugu horaysey ee uu dugsiga sare ee AL – Nuur Baran ku guulaysto tartanka dugsiyada sare ee gobollada Puntland.